Kitoza fumée - Trondro carpe fumée - Voyage à Madagascar
par Gaël RAKOTOVAO	 24 octobre 2016
Somary nampiasampiasa kitay izay tato ho ato ka nitsiry ny hevitra hoe andeha hanao kitoza fumée.
Fotoana hikarakarana azy: 2 na 3 andro sy 30 mn
Nofo-kena omby hatramin’ny 1kg fa zay fetra tiana anaovana azy,
Ail, sakamalao, poivre,
Fomba fikarakarana kitoza fumée
Lomana ail sy sakamalao sy sira ary poivre mandritra nt 30mn ny nofo-kena voatetika lavalava.
Rehefa mahandro sakafo amin’ny kitay dia ahantona akaiky eo ny kitoza ahazo ny fofo-kitay. Na maty aza ny afo dia avela hiantona eo ny hena. Somary nendasina kely avy eo rehefa maina nandritry ny 2 andro ny hena.
Na tsy misy kitay aza tsara koa ny kitoza maina. Mitovy amin’io ihany koa no fomba fikarakarana azy fa zany hoe tsy misy afon’kitay fotsiny.
Ra te ahazo sakafo tena gasigasy dia afangaroy amin’ny vary amin’anana ny kitoza. Mety koa ra vary sosoa.
Azo atao toy io ihany koa ny amalona.
Mety daholo rehefa karazana nofon-kena malemy fa tsy voatery filet bourguignon vao mety.
Asiana hetre kely ny kitay mba anome hanitra tsara azy. Azo asina citron na toaka kely koa rehefa mandona ny hena.
Raha trondro fumée indray dia atao en filet ny trondro dia atao vonto sira dia asaly toa io ihany. Alahatra ambony sahafa ka asiana afo kitay eo ambany. Atao afo malefaka.
Raha trondro carpe lehibe moa dia esorna ilay faritra amin’ny kibony iny de atao kitoza. Asina sira, poivre, tongolo gasy ary menaka kely. Ahantona eo ambony afo ho azon’ny setroka. Afaka 2 andro dia atono na endasina.
kitoza de boeuf
kitoza madagascar, kitoza receta, kitoza recette, kitoza recipe, laoka malagasy
Article précédent : Tsaramaso lena sy saucisse fumée
Poulet laquéArticle suivant :